Zanu-PF to transfer Blue Roof title deeds – ZTN
September 16, 2019 September 16, 2019 ZTN News0
Zimbabwe’s ruling party ZANU-PF has the title deeds to the late former President Robert Mugabe’s houses, namely the Blue Roof mansion in Borrowdale, and a Mount Pleasant house occupied by his daughter Bona.
Residence of the late former Zimbabwe President Robert Mugabe – The Blue Roof mansion in Borrowdale, Harare
According to family spokesperson and nephew to the late former President, Leo Mugabe, Zimbabwe’s President Mnangagwa is now working on modalities to transfer the title deeds of the two houses to the former President’s family, to ensure they have decent accommodation.
At a news conference in Zvimba on Sunday, Mr Mugabe confirmed that Zimbabwe’s late founding father did not own the houses.
President Mnangagwa, who was a special assistant to the former President during the liberation struggle, has repeatedly said he will ensure the family is well taken care of.
In his tribute to Cde Mugabe during a State funeral held at the National Sports Stadium in Harare on Saturday, President Mnangagwa said he will do everything he can to safeguard the legacy of the former President.
Mugabe arrives in Zvimba
Six bills lapse as Zim Parly snoozes